Sheekh Cumar-Faaruuq: Ramaddaanka lama Jihaado. Warbixin Jawaab u ah VOA (Dhagayso+ Daawo Vedio) | Halganka Online
Sheekh Cumar-Faaruuq: Ramaddaanka lama Jihaado. Warbixin Jawaab u ah VOA (Dhagayso+ Daawo Vedio)
JEDDAH:- Sheekh Cumar-Faaruuq oo u warramayey idaacadda codka Maraykanka, VOA, qaybteeda Afsoomaliga ayaa shaaca ka qaaday in aan bisha Ramaddaan la jihaadi karin. Wariye C/Casiis Xuseen Cismaan ayaa weydiiyey su’aal ahayd in dagaalka lalaba jibaaro ama la badiyo weerarada dhan ka ah Ciidamada Amisom sida ay sheegayaan kooxaxa Muqdishu ka dagaalamaya, ma diinbaa Sheekh Cumar?
Sheekh Cumar oo su’aasha ka leexday ayaa yiri waa in nabadda la adkeeyaa oo dadka walaalahaa aysan is dilin; Ramaddaanku waa marti culus waa in lagu soo dhaweeyaa cibaado iyo dagganaan iyo nabad, waana laga ilaalinayaa dagaal iyo balaayo iyo wax u eg.
Wariyaha ayaa ku celiyey su’aasha wuxuuna yiri sheekh Cumar waxaan u qaadanayaa ma ahan Diin in Bisha Ramadaan la dagaalamo iyo in colaad la sameeyo ee dhinaca salaamka, nabad galyada iyo amniga lagu dadaalo, sidaas miyaa?
Sheekh Cumar wuxuu ku jawaabay waa sida aad ila garatay oo u garatay waa in amniga lagu dadaalaa , iyo jacaylka walaal nimada muslimka. Waraysiga si aad u dhagaysato Halkaan Riix Ama Guji
sidoo kale ka Halkaan Riix Ama Guji
Fatwooyinkii sheekh Cumar-Faaruuq ee iska horyimid si aad u dhagaysato Halkaan Riix Ama Guji
Muuqaalka culumadii Orebro, Swiden ku shirtay 1997 iyo Stockhoim 1995 soona sooray fatwadii lagu gaalaysiinayey kuwa gaalada waddanka keenay sida Cumar Xaaji Masale oo 1996 Amaxaarada keenay Soomaliya khaasatan gobolka Gedo.
Tirada Culumadaan waa 6 Culumada hoosana waa 6 Tira is le eg.
(1) Sheikh Cumar Faaruuq
(2) Sheikh Aadan Ciise Gaadaale
(3) Sheikh Mohamed Cabdi Umal
(4) Sheikh Mohamed Sheikh Osman
(5) Sheikh Ahmed Rashaad Raximahulaah Aamiin
(6) Sheikh Abdullahi Ali Hashi
Sidoo kale Vedio hoos ka daawo taariikh xasuus mudan iyo dib-u-eegid 1997 shirkii Orebro, Sweden. Culumada Soomaliya sida ay shacabka Soomaliyeed ugu tarbiyadeeyeen gaala-nacaybka iyo in aysan dalkooda u ogolaan ciidamo shisheeye. Sidoo kale Vedio ga waxaa ugu horreeya Sharif Ahmed oo 10,000 toban kun oo wiil oo Soomaliyeed ugu khudbadeeyey Daynuunaay iyo Iidaale isagoo leh: shacab ma jabo ee waxaa jaba dowlad. Waxaa hadalladiisa ka mid ahaa: Itoobiya cidna waxba uma qaban karto. Shariif AXmed wuxuu dalka Itoobiya safar ku tagay intii uu xukunka qabtay 27 jeer halka C/laahi Yusuf uu safar ku tagay 16 jeer. Waxaa Shariifka loo heyataa 10,000 oo wiil ooeSoomaliyeed. Dhammaan wiilashaa Ciidamada Itoobiya ayaa xasuuqay. Vedioga si aad u Daawato Halkaan Riix Ama Guji
Muuqaalka culumada waligood ka soor jeeda ciidamada shishiiye oo aan mowqifkooda badalin. Culumo aan Amisom iyo faragalinta Meles Zenawi iyo Reer Galbeedka ogolayn ahna Geesiyaasha Ummadda Soomaliyeed, ka mudan bilad dahab ah iyo abaalmarin.
Tirada Culumadii hore 6 ayey ahaayeen Culumadaana waa 6 Tira is le eg
(1) Sheikh Jaamac C/salaan Warsame
(2) Sheikh Hassan Mohamud Takar
(3) Sheikh Dr Cumar Iimaan
(4) Sheikh Hassan Hussein Aadan
(5) Sheikh Abdulqadir Muumin
(6) Sheikh Hassan Daahir Aweys.Waxaa aad wax looga xumaado ah in wariyaha VOAda uu yiraahdo kuwo culuma sheeganaya isagoo heysata culumo waaweyn sida Dr Cumar Iimaan iyo Sh Jaamac oo isagoon dhalan ka baxay jaamacado Islaamiya. Culumadaas oo leh kitaabo laga akhristo dunida muslimka sida Dr Cumar Iimaan Kitaabadiisa. Uma malaynaynno in Soomalidu daraasadeeyaan tillaabooyinka culumada taas oo lagu ogaan karo xaqqa. Mana ahan caddaalad in laba sheekh oo aad taqaanno aad u qabto inay keligood culumo yihiin! Laakiin waxaa taas dhaami lahayd oo cadaalad u dhow in aad dhahdo: culumaa is haysa.
Qofkasta oo jecel in uu ogaado culumada Soomaliya wuxuu ku qanci karaa Vedio ga laga duubay 1997 iyo1995 xataa sheekh Cumar-faaruuq indhahaaga ku daawo, dhagahaaga ku maqal iyo weliba eheekh Umal oo wiil yar ah markaas jaamacada Madiina ka soo baxay. Ogoow in ay gaalo yihiin. Ha u hogaansamin walaalka Muslimka ahow Gumaystaha Meles Zanawi iyo faragalinta reer Galbeedka. Waxaad taageertaa Dowladda Islaamigaa. Culumada jihaadeysa ee dhallinyaradaa ayaa mustaqbalka waddanka Soomaliya iska leh ee aan ka amar qaadan Meles Zanwi iyo cadowga Soomaliya.
Yeysan ku niyad jabin website yada iyo iclaanka reer Galbeedka u adeega iyo cadowga Allah. Xasuusnow in 10 Gobal oo Soomaliya ka mida ay ka dhisan tahay Dowlad Islaama, kana madaxbannaan gumaysiga Meles Zanawi.
Somalimidnimo.com ka filo dhawaan muxaadaraad ku saabsan mowqifka Amisom iyo culumada Soomaliya ee u taagan sidii loo heli lahaa Dowlad Islaamiya iyo Soomali xor ah oo kaligood is maamula waxna aan loo yeerin. Culumada Soomaliyeed ee ku hoos nool waddamada gaalada waxaan u sheegaynnaa in aan u cudurdaarnnay annagu laakiin ay Allah ka baqaan oo haddii aydaan waxba taraynin walaalaha Dowladda Islaamka dhisaya ka daaya dacaayaaadka iyo gaalaysiinta.
Isha Maqalka Waraysiga Idaacadda VOA ayaa Xuquuqda Iska leh
« Zenawi: UWSLF Waxay Ahaan Jirey Argagaxiso Oo Hadda Nabadda Qaatay Markay Gobolka Ku Noolaan Kari Waayeen (Dhagayso SomaliTalk.com) Dagaallo ay ku hoobteen maleeshiyaadka Faroole oo xalay ka dhacay Galgala iyo hub Farabadan oo ay furteen xoogaga ATAM (Warbixin). »
baxar, on Nofeembar 8, 2010 at 12:31 g said:
asalaamu alaykum, walaalayaal anugu waxay ila tahay tagaal laguma gaadho wanaag ee aan iska dhafno maxa yeelay dagaal qayr keen ayuu inaga soo reebey.
waa midka halkaa ina dhigay maanta. ilaahay halaga baqo oo yaan ciyaalka iyo dumarka iyo odayaasha lalayn.
hadii kale banaanada isku dagaala.